Tijaabooyinka Guriga lagu Sameeyo ee Carruurta ugu Fiican - Ikkaro
Gudaha tijaabooyinka guriga waxaa waajib ku ah inay jirto meel u gaar ah waxa loogu yeero tijaabooyinka guriga ee carruurta. Waa tijaabooyin fudud oo ay carruurtu ku fulin karaan kaligood ama weheliyaan qof weyn waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo "guriga", taas oo ah, qalab si fudud loo heli karo oo raqiis ah.
Tijaabooyin fudud iyo ikhtiraac, oo badiyaa ka jawaab celiya xoogaa hanti jireed ah oo noo oggolaaneysa oo keliya inaan ka yaabinno carruurta iyo dhallinyarada, laakiin sidoo kale inaan sharraxno ifafaalaha jireed ee ka dambeeya falcelintan.
Maxay u dhacdaa? Maxaase dhacaya haddii halkii aan sidan ku sameyn lahaa sidan? Ama haddii aan beddelo qalabka / alaabta?
Had iyo jeer waa wax xiiso leh in ay kormeeraan dadka waaweyn mana aha oo kaliya in la damaanad qaado amniga ilmaha laakiin loo hago. Ka caawi inuu ka fekero, inuu isweydiiyo su'aalaha saxda ah. Kaa caawinaya inaad hesho macluumaadka oo aad isticmaasho qalabka aad heli karto.
Iyo sida ugu macquulsan ee ugu muhiimsan oo dhan si aad u awoodaan inaad ku baraarujiso xiisahaaga ku saabsan waxyaabaha iyo adduunka inagu xeeran. Hal-abuurnimo, xiise-aqooneed, barasho iyo dadaal badan.
Weligay waan jeclaa tijaabada noocan ah laakiin maadaama aan carruur haysto wax badan :)
Dhibaatada sida had iyo jeer ka jirta ayaa ah ogaanshaha sida loogu qaybiyo waxyaabaha, tijaabooyinka iyo alaabooyinka guryaha lagu sameeyo ee carruurta loogu talagalay si wadajir ah, gooni ah.
Hagaag, waa wax aan rajeynayno inaan si fiican u xallinno. Waxaan u maleynayaa inaan haysanno kala-saarid wanaagsan oo wanaagsan.
Ku raaxayso oo ka faa'iideyso dhammaadka usbuuca si aad u sameyso tijaabooyinka aan kaaga tagi doono adiga iyo carruurtaada. Hadana haddii aad macalin tahay, ha ka waaban inaad u kaxeyso fasallada.
Iyo markaad wax qabato. Fadlan faallo oo noo sheeg sida ay wax u dheceen.
Waxaan muddo dheer doonayay inaan isku dayo samee baraf macmal ah. Tani waa farsamo naga caawin doonta inaan qurxinno muuqaalkeenna dhalashada xilliga Kirismaska ​​ama haddii aan la samaysanno moodello kuwa yaryar oo aan dooneyno inaan siino taabasho dhab ah oo baraf leh. Ama kaliya inay gacmahooda wasakh yeeshaan oo ay qarax dhacaan.
Waxaan isku dayay 5 habab oo kala duwan si aan u yeesho baraf macmal ah, waan tusayaa oo aan isbarbar dhigayaa maqaalka oo dhan. Internetka ayaa ka buuxa casharro ku saabsan sida baraf loogu sameeyo xafaayad oo waxaan u arkaa inay tahay hawl masiibo ah oo aan ku habboonayn carruurta.
Isku daygii ugu horreeyay ee jahwareerka ka dib, waxaan jeclaaday waaya-aragnimada wax yar oo aan raadiyay habab badan oo lagu sameeyo baraf macmal ah oo macmal ah, hab aad u ammaan badan, oo ka qurux badan oo aad si fudud carruurtaada ula qaban karto. Hoos waxaad ku haysaa dhammaantood.
Haddii aad rabto alaabada ganacsiga inay helaan baraf macmal ah, baraf been abuur ah ama baraf deg deg ah, waxaan kugula talineynaa kuwan.
waxa ha Snow,
Sepkina (baraf macmal ah oo dhalaalaya)
Snowflakes Artifishal ah
Sida loo sameeyo duufaan
Qodobkaan waxaan uga tagaynaa dhowr qaab oo aan ugu soo saari karno duufaan yar guriga dhexdiisa. Waxay ka kooban tahay abuurista dabeyl ku jirta ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo khad aan muuqan
Waanu ogolaanay saddex hab oo loo sameeyo khad aan muuqan oo guriga dhexdiisa ah iyo si fudud.
Marka hore oo laga yaabee tan ugu fasiraadda badan waxay ka kooban tahay soo bandhigista xiirashada dhogorta birta ah, oo aan ka saareyno kuwa wax xada, liin dhanaan oo ha nasto inta u dhexeysa 7 iyo 15 maalmood.
Khad aan muuqan oo liin dhanaan ah
Tijaabada guriga ee muuqaalka leh caanaha
Waxaan is arkay rux leh tan tijaabo guri midab leh oo fudud, lagu sameeyay:
Ukunta Bouncing - Tijaabada Kimistariga
Xiiso leh, tijaabo inay noo diraan iskuulka gabadhayda. Waxay ku saabsan tahay a tijaabo fudud oo lala sameeyo carruurteennaWaan ogahay sida loogu soo bandhigo dunida cajiibka ah ee cilmiga, inkasta oo taas laga yaabo inaynu qaboojinno.
El aadanaha Waxay ka kooban tahay iskudhafyo fara badan oo howlo gaar ah oo muhiim ah u qabta, tusaale ahaan kaalshiyamku wuxuu leeyahay shaqo qaabdhismeed (adkeysi lafta). Markaad quusinayso laf dhanaan oo u daa dhawr maalmood, waxaad arki kartaa sida ay u jilciso oo xitaa u laaban karto ama u jebin karto farahaaga. Sababtuna waa isagaacetic acid (khal) xalku "wuu xadaa" macdanta lafta adoo la falgalaya iyaga oo abuuraya, tusaale ahaan, kalsiyum acetate. Sidan oo kale, xaddiga kaalshiyamka ayaa hoos u dhacay, kaas oo sababa a osteoporosis xayiraad.